Hal tayo oo asaasi u ah ummad kasta oo kusii yaraanaysa Soomaalida dal & dibedba (Waa maxay?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Hal tayo oo asaasi u ah ummad kasta oo kusii yaraanaysa Soomaalida...
Hal tayo oo asaasi u ah ummad kasta oo kusii yaraanaysa Soomaalida dal & dibedba (Waa maxay?)
(Hadalsame) 11 Jan 2022 – Soomaalida maantu ma aha Soomaalidii boqol sano ka hor ku dhaqnayd Geeska Afrika. Soomaalida caawa dunida ku filiqsani waa mid baratay gaalo iyo dhaqan-aqooneed cusub.
Waa Soomaali yeelatay dhaqan-aqooneed Carbeed. Baahiyo uuna qofkii Soomaaliyeed lahaan jirin baa ku soo baxay Soomaaliga cusub oo uu is lee yahay buuxi dabadeed ku gumoobay.
Waxaa la bartay wax loo bixiyay “siyaasad” oo ciyaalkii gaalada Yurub ee dhulkeenna ka talin jiray la ga bawsaday. Caawa dad Soomaaliyeed baa jira dunida, gudo iyo debedba, laakiin ma jirto ummad Soomaaliyeed iyo qiyam Soomaaliyeed.
Dadka Soomaalida ah ee jooga Göteborg, Muqdisho, Hargeysa, Minnesota, London, Neyroobi, Jabbuuti … Iyo meel kastaa waa Soomaali, laakiin ma laha qiyam iyo nadaam ummadeed.
Meel walba inta joogta waxaa hormuud u ah koox budhcad ah oo lacag jecel, qabyaaladdana diin ka dhigatay. Jaalliyad Soomaaliyeed oo ku taal tuulo Maraykan waa la dhaqan dawlad Soomaaliyeed oo ka jirta Geeska Afrika.
Previous articleKhalad ka muuqda qoraal kasoo baxay Madaxtooyada & arrin lagu arkay khudbadda MW Farmaajo oo hadalhayn dhalisay
Next articleMW Maraykanka oo ammaan & dhaliil iskugu daray RW Abiy Ahmed & sababta